Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka miyay ka qayb galayaan Korjoogto Caalami ah? – Daily Som
Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka miyay ka qayb galayaan Korjoogto Caalami ah?
By Staff on April 27, 2018 No Comment
Wararkii ugu dambeeyay ee anu ka helayno Guddiga Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegaya ij aysan imaan doonin wax korjoogta ah oo ka socda Beesha Caalamka.
Doorashadaan oo dhici doonta 30 ka bishaan ayaa qaban qaabadeeda waxa ay muqdisho uga socotaa si heer sara ah, waxaana laga dareemayaa Guud ahaan magaalada Muqdisho iyo dalka.
Gudoomiyaha Gudiga Doorashada Xildhibaan Nuur Iidow Bayle ayaa sheegay in ay timaad Korjoogto caalami ah imaashaooda in aysan muhiim.
Nuur iidoow oo ka hadlaya arinta korjoogtda ayaa sheegay in aan loo baanayn isla markaana ujeedkoodu yahay inaan loo dhaaxayn hadalkiisa ayaa waxaa ka mid ahaa “Ujeedka aan u sameynayn arrintan ayaa waxa ay tahay inaan loo dhaxeynin Baarlamaanka iyo Musharaxiinta”
Xildjibaan iidow ayaa sheegay Doorashadan in ay ka qeyb galayaan Xubnaha golaha shacabka oo codeynaya, wuxuuna tilmaamay Musharax walba in loo lee yahay hal cod oo kaliya.
Gudoomiyaha Gudiga Doorashada Afahayeenka Baarlamaanka Fedaraalka ah ee Soomaaliya Nuur Iidow Bayle ayaa rajo ka qaba in si cadaalad ah ku qabsoonto Doorashada, wuxuuna dhanka kale cadeeyay in ay la kulmeen Musharaxiinta oo dhan, isla mrkaana ay kala hadleen in la ilaaliyo nidaamka.
” keliya waxaan Musharax walba u ogolnahay Hal qof oo codadka u tiriya, dhammaan Musharaxiinta waan la kulanay waxaan u sheegnay in Doorashada ay ku dhaceys qaab cadaalad ah, iyaguna aad ayay noogu kalsoon yihiin.”.
Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka miyay ka qayb galayaan Korjoogto Caalami ah? added by Staff on April 27, 2018